Alaska Thunderfuck - ဝီကီပီးဒီးယား
2014 ခုနှစ် alaska Thunderfuck
ပိုကောင်းသည်သူ၏စင်မြင့်အမည်အား Alaska Thunderfuck အားဖြင့်လူသိများကို Justin အင်ဒရူး Honard, တစ်ဦးအမေရိကန်ဆွဲဖျော်ဖြေခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်အနုပညာရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ alaska အကောင်းဆုံးသူမက Roxxxy Andrews ကအတူတစ်လျှောက်ပြေးသမား-Up ရှိရာ RuPaul ရဲ့ဆွဲလူမျိုး၏ပဉ္စမရာသီပေါ်ပေါ်ထွန်းဘို့လူသိများသည်။ သူမသည် RuPaul ရဲ့အားလုံးကြယ်ဆွဲလူမျိုး၏ဒုတိယရာသီ၏ဆုရှင်သရဖူဆောင်းခဲ့ပါတယ်။
၅ ရုပ်ရှင်များ, တီဗီရှိုး, ကို web ပြပွဲနှင့်ပြဇာတ်ရုံ
၅.၃ Web ကိုစီးရီး
Honard သည် Edie, Pennsylvania ပြည်နယ်တွင်ကြီးပြင်းခဲ့ပြီး 2003 ခုနှစ်တွင် Fort leboeuf High School မှဘွဲရရှိခဲ့ပါသည်။ University of Pittsburghတက္ကသိုလ်မှပြဇာတ်ရုံကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။သူမသည် အကိုဖြစ်သူ Cory Binney နှင့်အတူ World of Wonder Web Series, Bro'Laska တွင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အစ်မ Brooke နှင့် ညီ Ryan လည်းရှိပါတယ်။.
Honard မူလကသရုပ်ဆောင်လိုက်ရန် Los Angeles မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါစာရင်းစစ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူမကျေနပ်သူဆွဲယူဖို့လှည့်နှင့်အနောက်နိုင်ငံများဟောလိဝုဒ်ကလပ်မှာအလုပ်ရခဲ့တယ်, Fubar ။ သူကမကြာခဏ Los Angeles မြို့မှာရှိတဲ့ Trannyshack ပြပွဲများတွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ 2009 ခုနှစ်တွင်သူသည် Tammie ဘရောင်းနှင့်ယေ Ber ဂျုံးစ်နှင့်အတူ Palm Springs ဂေးမာနအတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ 
2013 ခုနှစ်မှာ Alaska Thunderfuck
ဒါဟာ Alaska Thunderfuck RuPaul ရဲ့ဆွဲလူမျိုးများ၏ပဉ္စမရာသီပေါ်ယှဉ်ပြိုင်လိမ့်မည်ဟုသူကို 14 ဆွဲမိဖုရားအကြားခဲ့ကြောင်းနိုဝင်ဘာလ 2012 ခုနှစ်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ပေမယ် mononym Alaska အားဖြင့်လူသိများမည်ဖြစ်သည်။ သူသည်ယခင်ကပြပွဲသည်ရာသီ auditioned ခဲ့သည်။ alaska အဆိုပါဇာတ်လမ်းတွဲ "ဟုဆွဲဘုရင်မ၏ရနံ့" နှင့်များအတွက်အဓိကစိန်ခေါ်မှုအတွက်အမွှေးအကြိုင်စီးပွားဖြစ်ပုံစံအဓိကစိန်ခေါ်မှုအနိုင်ရ "သကြား Ball ကို။ " ပြပွဲ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်, Alaska က "ကျနော်တို့ကမ္ဘာ့ဖလားနေ" -inspired သီချင်း "ကျွန်မအနေနဲ့အာမင် Get နိုင်သလား?" ပေါ်တွင်သီဆိုခဲ့။ အဆိုပါသီချင်းရဲ့ရရှိသောလော့စ်အိန်ဂျလိစ်ဂေးများနှင့်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းကိုထောက်ခံရေးစင်တာအတှကျအကြိုးကူညီပေးခဲ့သည်။ မေလ 2013 ခုနှစ်, ရာသီဇာတျသိမျးကာလအတွင်း Jinkx မုတ်သုံလေဆုရှင်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်နှင့် Alaska သူချင်းယှဉ်ပြိုင် Roxxxy Andrews ကအတူရာသီ၏ပြေးသမား-up, ကြေငြာခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ 2013 ခုနှစ်, Alaska အဆိုပါကျောက်ထိတ်လန့ပြရန်၏ Woodlawn ပြဇာတ်ရုံရဲ့ထုတ်လုပ်မှုဒေါက်တာဖရန့် N. Furter အဖြစ်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ RuPaul ရဲ့ဆွဲလူမျိုးတရားသူကြီး Michelle နီနှင့်ရာသီလေးပြိုင်ပွဲဝင် Willam ဝမ်းလည်းဂီတအတွက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ 
Honard ကတည်းကဂီတကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို လိုက်. , ဆိုရင် single တစ်ခု string ကို, အမည်ရ "Ru မိန်းကလေး", "သင့်ရဲ့မိတ်ကပ်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်၏" နှင့် "လက်သည်း" ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ဇွန်လ 2015 ခုနှစ်, Alaska ရဲ့ပွဲဦးထွက်အယ်လ်ဘမ်စအို, အပြုသဘောသုံးသပ်ချက်များကိုပြန်လည်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ အယ်လ်ဘမ်ထဲကနေတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက် "Hieeee" နှင့် "ဤသူသည်ငါ၏ဆံပင်က" ပါဝင်သည်။
အောက်တိုဘာလ 14, 2016 ခုနှစ်, Alaska Poundcake ဟုခေါ်တွင်သူမ၏နောက်ဆုံးပေါ်အယ်လ်ဘမ်ဖြန့်ချိ။ အဆိုပါအယ်လ်ဘမ်ထိုကဲ့သို့သော "ဒီ T က", "Stun", "ရုပ်သေး" နှင့်အခြားသောသူများအဖြစ်ဆိုရင် single ပါဝင်သည်။ အဆိုပါအယ်လ်ဘမ် Poundcake, Alaska နှင့်သူချင်းယှဉ်ပြိုင် Lineysha Sparx Lil '' Poundcake လို့ခေါ်တဲ့ပုန်ကန်သောရုပ်သေး created ဘယ်မှာ RuPaul ရဲ့ဆွဲလူမျိုးအပေါ်ရုပ်သေးစိန်ခေါ်မှုပြီးနောက်အမည်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ alaska ထိုကဲ့သို့သောချစ်စဖွယ် Delano, ဂျက်ကီဘိ, အလှမယ် Fame နှင့် Gia ဂွန်အဖြစ်သူမ၏အယ်လ်ဘမ်ပေါ်ရှိအခြားဆွဲမိဖုရားပါရှိပါတယ်။[ကိုးကားချက်လိုသည်]
အောက်တိုဘာလ, 2016 ခုနှစ်တွင် Alaska ဟာလိင်တူချစ်သူအသိုင်းအဝိုင်းထံမှလူနှင့်ပြည့်စုံသည်၎င်း၏ပြေးလမ်းလူသိများသောဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်, Marco က Marco ကကျင်းပမယ့်ဖက်ရှင်ရှိုးအတွက်လုပ်ပါတယ်။ သူမကသူမ၏သစ်ကိုထိခိုက် "ရုပ်သေး" backup လုပ်ထားသိပ်ပြီးနှင့်အတူအသက်ရှင်ဖျော်ဖြေနေစဉ် alaska လေယာဉ်ပြေးလမ်းသွားလာ၏။ သူမသည်မာကိုမာကိုဖက်ရှင်ရှိုး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းမဆိုဆွဲမိဖုရားအဘို့စစ်မှန်တဲ့လာမယ့်အိပ်မက်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။.
alaska Thunderfuck ယေ Ber ဂျုံးစ်ရဲ့ဆွဲသမီးကို (ဆွဲမိ၏နာမတျော၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ချမှတ်သူအလုပ်သင်) ဖြစ်ပါသည်။ ဂျုံးစ် Los Angeles မှာဝေါဟာရနှင့်ထိုကဲ့သို့သော Leigh Bowery နှင့် Cockettes အဖြစ် nontraditional ဆွဲလွှမ်းမိုးမှုအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ရာရှေ့ဆောင် "tranimal" ဆွဲများအတွက်မှတ်ချက်ပြုသည်။ Honard ရဲ့ဆွဲ name ကို Alaskan Thunderfuck, ဆေးခြောက်တစ် strain ကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ alaska သူမ၏အဓိကလွှမ်းမိုးမှုအဖြစ်ဘုရားသခငျ့, Britney Spears, လေဒီဂါဂါနှင့် Marilyn Monroe မှတ်တော်မူ၏။ သူမ၏ဆွဲဇာတ်ကောင်ရဲ့နောက်ကျောဇာတ်လမ်းန်းကျင်ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်လေယာဉ်ပျက်ကျမှု-ဆင်းသက်ခဲ့သူဂြိုဟ် Glamtron ကနေတကျွန်းတနိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းကိုဗဟိုပြု။.
ဖြန့်ချိ: ဇွန်လ 23, 2015
စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ: ဒစ်ဂျစ်တယ် download
ဖြန့်ချိ: အောက်တိုဘာလ 14, 2016
label: ထုတ်လုပ်သူ Entertainment Group
စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ: ဒစ်ဂျစ်တယ် download,
2014 — စအို
(featuring Laganja Estranja)[ကိုးကားချက်လိုသည်]
"—" chart ပျက်ကွက်သို့မဟုတ်နယ်မြေထဲမှာဖြန့်ချိမခံခဲ့ရကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ဆိုလိုသညျ။
(Rupaul featuring Drag Race Season5Cast)
"ငါ Fuckin '' Cool ကွညျ့ရှု"[ကိုးကားချက်လိုသည်]
(Adore Delano featuring Alaska Thunderfuck)
2014 — Till Death Do Us Party
10 Shartistry in Motion
(Willam featuring Alaska Thunderfuck)
(RuPaul featuring Alaska Thunderfuck, Detox, Katya & Roxxxy Andrews)
ရုပ်ရှင်များ, တီဗီရှိုး, ကို web ပြပွဲနှင့်ပြဇာတ်ရုံ[ပြင်ဆင်ရန်]
2015 TupiniQueens ကိုယ်တော်တိုင် ထုတ်လုပ်မှုအတွက်။ ဘရာဇီးရုပ်ရှင်။
2011 RuPaul's Drag Race ကိုယ်တော်တိုင် Season3– Episode 1: Casting Extravaganza
2012 RuPaul's Drag Race: Untucked ကိုယ်တော်တိုင် Season4– Cameo in video message
2013 RuPaul's Drag Race ကိုယ်တော်တိုင် Season5– Runner-up
2013 RuPaul's Drag Race: Untucked ကိုယ်တော်တိုင် Season 5
2015 The Art Of ကိုယ်တော်တိုင် Episode: "The Art of Drag"
2015 RuPaul's Drag Race ကိုယ်တော်တိုင် Season7– Episode 1: Born Naked
2016 RuPaul's Drag Race ကိုယ်တော်တိုင် Season 8 – Episode 10: Grand Finale
2016 RuPaul's All Stars Drag Race ကိုယ်တော်တိုင် Season2– Winner
2017 The New Celebrity Apprentice ကိုယ်တော်တိုင် ဇာတ်လမ်းတွဲအပိုင်း: 'Candy ForaBillionaire'
2013 Pure Camp ကိုယ်တော်တိုင် World of Wonder မှထုတ်လုပ်သည် 
2014–present Bro'Laska ကိုယ်တော်တိုင် World of Wonder မှထုတ်လုပ်သည်
2013 The Rocky Horror Show Dr. Frank N. Furter Woodlawn ပြဇာတ်ရုံ
↑ Bro'Laska with Alaska Thunderfuck & Cory Binney - Golden Child - YouTube
↑ Lucid၊ Michael (18 November 2009)။ JAMES ST JAMES GOES TO THE ACE HOTEL။ World of Wonder။ 20 April 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Shorey၊ Eric (8 October 2013)။ Willam, Alaska And Michelle Visage Get Ready To Rock "Rocky Horror Show": PHOTOS။ New Now Next။ 11 November 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Alaska Thunderfuck - Nails [Official]။ YouTube။
↑ The Magic Critique: 'Anus' by Alaska Thunderfuck Album Review။ themagiccritique.com။
↑ Alaska's ANUS Album #1 on Dance and #38 All Categories - World of Wonder။ World of Wonder။
↑ Alaska Thunderfuck Makes Better Dance Music Than Your Vanilla Garbage။ NOISEY။
↑ Daniel Reynolds။ Why Alaska Thunderfuck Titled Her New Album 'Anus'။ Advocate.com။
↑ #MarcoMarcoShow | Adore & Alaska | A Night In The Red Light - YouTube
↑ Slice၊ Kymbo။ The Alaska Thunderfuck Interview။ Nak You Out။ 20 March 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Alaska Thunderfuck – Chart history (Dance/Electronic Albums)။ Billboard။ October 26, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Alaska Thunderfuck – Chart history (Heatseekers Albums)။ Billboard။ October 26, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Alaska Thunderfuck – Chart history (Independent Albums)။ Billboard။ October 26, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ultratop.be - Discografie Alaska Thunderfuck။ Ultratop. Hung Medien။ October 22, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Billboard Chart Archive (To access, type "Alaska" in the artist bar, then select "Comedy Digital Tracks" in the chart name bar)။ Billboard။ Prometheus Global Media။ May 17, 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Asea၊ Adam (22 August 2013)။ The Premiere of Sharon Needles and Alaska: Pure Camp။ World of Wonder။7December 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Internet Movie Database ပေါ်ရှိ Justin Andrew Honard
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=Alaska_Thunderfuck&oldid=411775" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၈၊ ၁၅:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။